खराब जनप्रतिनिधी ? सज्जन नगरवासी ? - लण्डन काठमाडौँ
बुटवल, फागुन २०/ स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनताको आ“गनमै सरकार गठन भएको पौने तिनबर्ष पुगेको छ ।
यो तिन बर्षको अवधीमा रुपन्देहीका १६ वटा पालिकामध्ये सबैका आ–आफ्नै काम गर्ने शैलीका कारण कोही गुमनाम छन्, कोही चर्चामा छन्, कोही करीब करीब बदनाम पनि छन् ।
जनताले तिरेको करमा मस्ती ? यो आम नागरीकको प्रश्न हो, यो प्रश्न सबैका मुखमा छ । मतदाता मात्र होईन ज–जसले निर्वाचनमार्फत उनिहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउन (जनप्रतिनिधी बनाउन) पहल गरे उनिहरु मात्र होईन कतिपय ठाउ“मा निर्णयकर्ताहरु पनि पछुताएका छन् सायद ।
सबै पालिकाहरुको एक/एक केलाउन अहिले सम्भव नहोला । अरुलाई छोडेर रुपन्देहीको राजनितीक केन्द्रमा रहेका २ पालिकाहरुको मात्रै कुरा गरौं ।
रुपन्देहीका दुईवटा पालिकाहरु अहिले चर्चाको केन्द्रमा छन् । एउटा कामले चर्चामा छ जुन तिलोत्तमा नगरपालिका, अर्को राजधानीको हिसाबले चर्चाको केन्द्रमा छ बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिकाको राम्रै गुणगान चलेको छ । जुन अकाट्य छ, सबैले देखेका छन् । बुटवल राजधानीका हिसाबले केन्द्रमा छ, तर आलोचना बढी छ ।
तिलोत्तमा किन त्यसो भयो सधै चर्चामा ? जवाफ सहज छ । तिलोत्तमाले आफुलाई समयसंगै दौडाउन सक्यो । आफु मात्रै दौडेको छैन हरेक अभियानमा एकएक नगरवासीको साथ लिएर दौडेको छ । अर्थात् यसो भनौं नगरपालिकाका हरेक अभियानमा तिलोत्तमा नगरबाशीपनि नगरपालिका संगै दौडिएका छन् ।
राजनितिक मतभेद छ, चोकमा, पार्टि कार्यालयमा, चिया पसलमा तर सडकमा मतभेद छैन, बिकासमा मतभेद छैन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अगाडी बढाउने सवालमा मतभेद छैन, तिलोत्तमालाई ग्रिन र क्लिन बनाउने अभियानमा मतभेद छैन ।
नागरिकहरु अरु विषय भन्दा पहिलो बिकास भन्दै साथ दिएका छन्, सरसफाई भन्दै साथ दिएका छन् र शैक्षिक बातावरण भन्दै साथ दिएका छन् । तर खोई त बुटवलका नागरिकले उपमहानगरसंग कांधमा कांध मिलाएको ? सरसफाई अभियान चलाएको ?
अमरपथका एकजना घरधनी हुनुहुन्छ उपमहानगरपालिकाको फोहोर उठाउने गाडी आउदा फोहोर भित्र लैजानु हुन्छ, जब उपमहानगरपालिकाको गाडी टोलछिमेकीको फोहर उठाएर जान्छ अनि जताततै फोन गर्न थाल्नु हुन्छ । उपमहानगरपालिका फोहर उठाउन आएन समाचार बनाई दिनु प¥यो भनेर ।
तिलोत्तमामा नगरपालिकाले अगुवाई गरेको छ । संघ संस्थाहरुले साझेदारी गरेका छन् । सक्नेले आर्थिक साझेदारी पनि गरेका छन् नसक्नेले भावनात्मक रुपले उपस्थीत भएर श्रमदान गरेका छन् ।
सरसफाईको महाअभियान तिलोत्तमाका संघ संस्थाहरुले चलाए, जहा न्युन संघ संस्थाहरु छन् । तर सफल गराए । हरीयाली प्रवद्र्धन भन्दै हरेक साता सनिवार झाडी फाड्न र नयां बिरुवा लगाउन सडकका चोक, खाली जग्गा र कुलो र नालीहरुमा पुग्ने गर्छन् । तिलोत्तमाका नागरीकले आफ्नो जन्मदिनमा बृक्षारोपण गर्ने अभियान चलाए ।
खोल्साखाल्सी, झाडी, जंगल बुट्यान, पार्क र नहरबाट खुल्ला प्लाष्टिक मुक्त अभियान भन्दै हरेक टोलटोलबाट नागरीकले खुल्ला प्लाष्टिक बटुले, एकिकृत गरे, नगरपालिकालाई बुझाए । बिद्यार्थीहरुले बिद्यालय जांदा घरमा भएको प्लाष्टिक लगेर त्यस बापत पैसा बुझेर आए ।
प्लाष्टिक टिप्न सडक, नहर र कुलोको डिलहरुमा महिनौंसम्म पुगिरहेपनि प्लाष्टिक आउन छोडेन । प्लाष्टिक आउने मुहान बन्द गर्नूपर्छ भनेर बुटवलबाट आउने नहरमै जालि लगाईदिए । त्यहां जम्मा भएको फोहोर समेत उठाए, तर बुटवल डेग चलेन, लाजै मानेन । न बुटवलका जनप्रतिनिधीलाई गलत गरियो भन्ने लाग्यो न नगरवासीलाई ।
बुटवलले त्यही काम गर्न सक्दैन ?
वा हामी बुटवलवासी सडकमा अलपत्र मानिसको ब्यवस्थापन गर्न पनि चितवनका रामजी अधिकारी बुटवल आउनु पर्याे हामीलाई कत्ति पनि लाज लागेन, खसखस लागेन सहज पचाउन सक्छौ यस्ता बिषय । हामीले गर्नुपर्ने दु:ख अरुले गर्दियाे, हामीलाई केहि झै लाग्दैन ।
मेयर खराव रे, उपमेयर अधिकार बिहिन रे, कर्मचारी काम नलाग्ने रे, अनि मेयरलाई गालि गर्दै सुर्ती र गुट्का खाएर सडकमा प्लाष्टिक फाल्ने र पिच्च थुक्ने तपाई हामी ठिक ?
धेरै टाढा नजाउ, सोह्र छत्तिस नामको तपाहलाई मात्र हेरेपनि पुग्छ। बुटवलको कन्ने ढुंगा अर्थात् बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ३ को उत्तर पश्चिम पुल्चोकबाट शुरु हुन्छ ।
त्यहांबाट शुरु भएका नहर किनारका अधिकांश घरधनीले घरको नाली, भान्साको पानी बगाएर त्यही नहरमा मिसाएका छौं । अनि हामी चोकमा बसेर उपमहानगरपालिका र मेयर उपमेयरलाई केही गरेनन् भन्दै गालि गर्छौ ।
१५ वर्ष पहिलेसम्म देविनगर हुंदै बग्ने १६/३६ नहरको पानीमा नहर आसपासका बासिन्दाले नुहाउथे, कपडा धुन्थे, गाईबस्तुलाई खुवाउन यहि पानी प्रयोग गर्थे । तर अहिले नहरमा पानी होईन नहर छेउछाउका घरहरुको ढल बग्ने गर्छ ।
बुटवलको मध्यभागबाट ६ लेन सडक सलल बगेको छ । दायांबायां तारजाली लगाएर बिरुवा लगाईएको छ । सुन्दर फुलबारी बन्यो राम्रो काम भयो भन्दै प्रसंशा भएकै छ । बुटवलका केही टोल बिकास संस्था यस्ता छन् की तिनले गरेका काम र सरसफाईको सबैले प्रशंशा गरेकै छन् ।
तर आफुले अलिकती पनि सहयोग नगर्ने तर मेयर, उपमेयर र उपमहानगरपालिका मात्रै खराव देख्ने आंखाको दृष्टि परिवर्तन नभएसम्म बुटवलले सानातिना समस्याबाट मुक्ती पाउनै कठिन छ ।
पछिल्लो समय बुटवलबाट ठूला आयोजनाहरु पुरा नभई र कतिपय त शुरु नहुंदै फर्किएर गए । त्यसमा उपमहानगर र नगरवाशी कसको कति भूमिका रह्यो आफै स्मरण गरौं । अझैपनि विगतका कमिकमजोरी सच्चाउन नसक्ने हो भने नयां आयोजनाहरु आउनेमा आशंका छ ।
सडक चौडा गर्ने तिलोत्तमाका बासिन्दाले चुपचाप साथ दिए । म बनाउंछु मेरो नगर भने, घरको गाह्रो र कोठा भत्काएर सडकको फुटपाथ बनाउन सघाए । तर बुटवलमा हेरौं त ? एउटै सडकमा दर्जनौ मुद्दा ।
हामीले नगरको बिकासमा साझेदारी गर्न नपर्ने, गालिमात्र गरिरहने प्रवृत्ती कहिले सम्म ? के बुटवलका जनप्रतिनीधी सबै खराव, अनी हामी मात्रै सज्जन ?
तनहुँको रुवाखोला पुलबाट मिनी ट्रिपर खस्दा चालकको मृत्यु
योजना आयोग र राज्यमन्त्रीकै भावना विपरीत आयो लुम्बिनीको बजेट
सूर्य थापा भन्छन्- घनश्याम भुसालले नेतृत्वप्रति औंला तेर्साउने समय आएको छैन
निर्यात प्रोत्साहन कार्यान्वयन गर्न सिमेन्ट उत्पादक संघको माग
चले ब्रुमर र पूर्वाधार एम्बुलेन्स, ‘इनर्जी बिन’ चलाउन अध्ययन हुँदै
‘डोली’ खारेज गर्न खोज्दा सडक विभागमा आन्दोलन
काठमाडौंको खुलामञ्चमा भूमेको रौनक (फोटो फिचर)
नेपाल-अमेरिकाः एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको नेपाली सेनाको भनाइ